राजनीति Archives - Page 39 of 46 - Muldhar Post
को को परे समानुपातिक सुचिमा ? नाम सहित हेर्नुहोस्
काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसबाट १९ पुरुषको समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ। तीन दलमध्ये समानुपातिकमा सवैभन्दा बढी पुरुष सांसद् कांग्रेसले छनोट गर्न पाउने भएको छ। कांग्रेसले १९ पुरुष समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनेछ। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सिट जितेको छ। समानुपातिकमा कांग्रेसले ४० सिट पाउने देखिन्छ। दुबैतर्फ गरी ...
काठमाडौं– सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि बैधानिक बाटोको खोजी भइरहेको बताएको छ । चुनावबाट बहुमत पाएको वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभालाई लिएर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाएपछि सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको खण्डन गरेको हो । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ताएवं सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रि...
काठमाडाैं- सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट माअोवादी केन्द्रको केन्द्रिय बैठकमा पेरिषडाँडामा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सकिएपछिको पहिलो बैठकमा माअोवादी नेताहरुले सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्ने नेताहरुले पार्टी एकता हुँदा पदको सम्मानजनक बाँडबाँडमा समेत जोड दिएका छन् । बैठकको...
भाग्य चम्किएकी नविना र रामकुमारी, सांसद बन्ने सम्भावना बलियो
काठमाडाैं - भाग्य चम्किएकी २ महिला जो अहिले एमाले अखिलका वर्तमान अध्यक्षको पदमा रहेकी छन् नविना लामा र पूर्व अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री । नामले धेरै चर्चा कमाइसकेकी लामा र झाँर्की अहिलेको समानुपातिक तर्फका सांसद बन्ने लगभग पक्कापक्की जस्तै भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पाएको समानुपातिक तर्फको प्राप्त मत अन...
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न , खै कसरी अोली प्रधानमन्त्री बन्छन : देउवा
काठमाडाैं- ब्रतमान सरकारका प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीसंग बम्किएका छन् । उनले प्रधान्त्रीको पदबाट राजीनामा नदिने भनी हकारेका छन । सरकारका केही विश्वस्त मन्त्रीहरुसँगको आन्तरिक छलफलका क्रममा देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित नभएसम्म राजीनामा नदिने बताएका हुन् । ...
केहि वेरमा बस्ने माअोवादी केन्द्रको बैठकमा यी विषयमा छलफल हुदै ?
काठमाडौं– मुलुकको राजनीतिक अवस्था, सरकार गठन, निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणाम लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि भावी कार्यदिशा बारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दैछ । प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजे पा...
कुन प्रदेसमा कसको सरकार बन्दै छ ? यस्तो छ सत्ता समिकरण
काठमाडाैं- एमालेले प्रदेश नम्बर १ र ३ मा बहुमत पाएको छ। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षमा ५६ र समानुपातिक ३७ गरी कुल ९३ सिट रहेको छ। एमाले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ भने समानुपतिकमा १६ सिट आउने सम्भावना छ। ४७ सिटले बहुमत पुग्छ। एमालेको मात्रै ५२ सिट छ। प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको छ भने समानुपात...
देउवामाथि हमला गरे ओली र प्रचण्डले, यस्ता छन १५ हमला
काठमाडाैं- चुनावमा शानदार जित निकालेपछि आज बामगठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गर्यो । तर, पत्रकार सम्मेलन सरकारका काम र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कार्यशैलीमाथि हमलामा केन्द्रित रह्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको संयुक्त विज्ञप्तिबाट शुरु भएको हमला पत्रकार सम्मेलन सकिने बेलासम्म कायम रह...
समानुपातिकतर्फको सम्पुर्ण मतगणना सम्पन्न कसले कति पायो हेर्नुहोस्
काठमाडाैं- समानुपातिकतर्फको सम्पुर्ण मतगणना सकिएको छ । समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत पाएको छ । एमाले भन्दा ४५ हजार १ सय ५ कम मत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो भएको छ । कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय...